Zavatra ho hita sy atao any Hamburg | Vaovao momba ny dia
Zavatra ho hita sy hatao any Hamburg
Hamburg dia tanàna hafahafa, ny faharoa be mponina indrindra any Alemana ary ny maintso rehetra. Manana seranan-tsambo lehibe izy ary tanàna mifandray amin'ny varotra nandritra ny taonjato maro, na dia tsy manana ranomasina aza, fa farihy tsara tarehy izay manome be ihany koa ho an'ny mpizahatany. Tanàna tsara tarehy sy milamina izay misy be ny zavatra hita sy azo atao.
Miresaka tanàna iray alemanina izay tsy be mpitia indrindra izahay fa manolotra toerana mahaliana maro ho an'ireo mpizahatany. Betsaka ny habaka maintso ka io no tanàna maintso indrindra any Alemana. Mbola betsaka ny zavatra azo jerena, tranombakoka, faritra fialamboly, tsena ary tsangambato. Ka diniho daholo fitsidihana tena ilaina any Hamburg.
1 Kianjan'ny Hall Town
2 Museum momba ny zavakanto Kunsthalle
3 Fitsangatsanganana an-tsambo eo amin'ny Farihy Alster
4 Miantsena ao Jungfernstieg
5 Misotro ao amin'ny Reeperbahn
7 Tsidiho ny Fischmarkt
8 Jereo ny Miniatur-Wunderland Museum
Kianjan'ny Hall Town
Ny tanàna tsirairay dia manana ny toerana fantany indrindra, ary ny Town Hall Square dia io toerana io ao Hamburg. Manana tsara tarehy ny lapan'ny tanàna neo-renaissance façade, ary izy io dia trano iray tamin'ny taonjato faha-XNUMX, raha teo amin'ny tampon'ny toekarena ny tanàna. Izy io dia tranobe tandindona sy tena lehibe izay misy fampiasana ankehitriny, manomboka amin'ny toerana anaovana ny politika ka hatramin'ny toerana anaovana fampirantiana.
Museum momba ny zavakanto Kunsthalle
Niainga ho tranombakoka tsotra ho an'ny mpanakanto ao an-toerana io mba hampisehoana ny sangan'asan'izy ireo, saingy androany dia zava-dehibe izany tranombakoka zavakanto iraisam-pirenena, ary tsy maintsy jerena ho an'ireo tia zavakanto. Ny asan'i Degas, Toulouse-Lautrec, Renoir, Gauguin na Manet dia hita ao anatiny, ka mahatonga azy io ho toerana malaza eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena.
Fitsangatsanganana an-tsambo eo amin'ny Farihy Alster
Ny renirano Alster izay mamakivaky ny tanàna dia nahatonga ny famoronana ny farihy roa miantsona izay nantsoina tamin'ny anarana hoe Alster Lake. Ny fandehanana any Hamburg koa dia mankafy ny seranana sy ny farihy, noho izany dia afaka mandray ny iray amin'ireo sambo mpizahatany ao jetty ao amin'ny faritra Jungfernstieg velona hamakivaky ny farihy amin'ny làlan'ny faritra mirehitra indrindra ao an-tanàna. Fitsangatsanganana an-tsambo tsara sy mangina ao amin'ny tanàna izay tsy misy ranomasina na mila azy.
Miantsena ao Jungfernstieg
Raha iray amin'ireo tsy maintsy miantsena amin'ny toerana rehetra foana isika, dia misy faritra isaky ny tanàna voatokana ho amin'izany. Ao Hamburg dia i Jungfernstieg, faritra iray misy fivarotana fivarotana hatramin'ny folo, ary izany koa ao amin'ny tanàna taloha, toerana feno tranobe tsara tarehy, mety tsara handehandehanana mankafy miantsena.
Misotro ao amin'ny Reeperbahn
Làlana momba ny fiainana amin'ny alina ity, ny toerana quintessential hanaovana fety. Ao no ahitantsika jiro sy toerana maro, satria eto dia tsy ny trano fisotroana na fisotroana ihany, fa misy ihany koa ny fivarotana fanaovana firaisana ary ny trano fivarotan-tena ara-dalàna. Ankoatr'izay, ity no lalana nilalao ny Beatles tamin'ny toerana maro hampahafantarana ny tenany tamin'ny andro voalohany. Any amin'ny manodidina an'i St. Pauli no misy azy ary tsy azo atao ny mandalo amin'ireo jiro sy loko rehetra miantso antsika.
Hamburg dia voalaza fa iray amin'ireo tanàna maintso indrindra eran'i Alemana, ary azo antoka fa manana habaka voajanahary be dia be mba hankafy fitsaharana kely taorian'ny fitsidihana sy fety be loatra. Planten un Blomen park, eo afovoany, no havokavoka maitso ao an-tanàna, ary ny toerana mety handosirana sy hankafizanao ny dianao sy ny zaridaina botaniolo izay ao anatiny. Ao amin'ny valan-javaboary misy koa loharano na faritra hikorisa.
Tsidiho ny Fischmarkt
Ny alahady amin'ny valo maraina dia mitranga ny iray amin'ireo zavatra velona indrindra hitanay tao an-tanànan'i Hamburg. Momba ny lavanty trondro ao amin'ny Fischmarkt, ny tsena trondro tranainy indrindra ao an-tanàna, izay notanana hatramin'ny taonjato faha-XNUMX. Na dia tsy maintsy mifoha maraina aza isika dia voalaza fa fampisehoana tena mahafinaritra sy mavitrika izany. Vao maraina ny varotra, saingy mbola betsaka ny zavatra tokony hatao, satria misy vondrona mivantana sy toerana maro hafa izay ahitanao entana isan-karazany. Betsaka ny olona avy ao an-tanàna no mivory eto isaky ny alahady maraina.
Jereo ny Miniatur-Wunderland Museum
Raha iray amin'ireo olona tia kely ianao ary mahita an'ireto fanehoana kely an'izao tontolo izao dia mila mahita ny tranombakoka Miniatur-Wunderland lehibe ianao. dia fampirantiana goavambe Mampiaiky volana ny rehetra izany, ary tsy olana amin'ny kely fotsiny izany, fa izao tontolo izao kely fotsiny ho antsika irery, mankafy ny antsipiriany kely rehetra, satria ity tranombakoka ity dia misy antsipiriany betsaka. Ny lalana dia manarona maherin'ny arivo metatra toradroa izay ahitanao ny fisehoan'ny Alpes, faritra ara-barotra, tanàna ary koa seranam-piaramanidina. Ny zavatra mahagaga dia mandritra ny dimy ambin'ny folo minitra isan'andro dia manomboka ity tontolo ity ary afaka mahita isika, ohatra, fa miainga ireo fiaramanidina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Zavatra ho hita sy hatao any Hamburg
Fialan-tsasatra fahavaratra any Maorisy